6000 ft. + Ny fametrahana karbona vita amin'ny ranomasina Cay, Island Bahamas - Ellicott Dredges
Ampitao ny voatavo Aragonite Slurry 6,000 tongotra ao amin'ny tetikasan'ny fitrandrahana Bahamas ho an'i Marcona
Fitaovana famokarana aragonita akaikin'i Bimini, ny Bahamas dia mitaky ny fantson-tsolika amin'ny fitrandrahana mineraly mankany amin'ny fehezana mifanakaiky ary avy eo amin'ny alàlan'ny tsipika 6,000 tongotra mankany amin'ny zavamaniry zaridaina ao amin'ny Ocean Cay, nosy artifolika tsy lavitra.
The Marcona Ocean Industries Mampiasa ny Ellicott-24-inch Ellicott ny fandidiana® cutter suction dredge "Allan Judith". Mampita ilay slurry mankany amin'ilay sambo “Guthrie III”, ilay toerana, ary miditra ao anaty fitoeram-pamokarana izy ireo ary ampitaina anaty rano 30 ka hatramin'ny 35 isan-jato.
Aragonite dia endrika kalsioma karbônina (CaCO3) madio izay mifaninana amin'ny fetra an-trano any Etazonia. Mihoatra an'arivony taonina ao amin'ny Grand Bahamas Bank izy io ary noforonin'ny ranon-dranomasina. Izy io dia ampiasaina amin'ny tanjona toy ny famokarana simenitra, fanamboarana vera, famerana ny fambolena ary fanilihana ny fako asidra ataon'ny orinasa simika. Ny fitaovana dia manana firafitra tsy miovaova, boribory, kely masinina ary tena ambany be amin'ny vy sy ny loto loto.
Marcona dia fitrandrahana fahazoan-dàlana izay misy 22 kilometatra lava, roa kilometatra ny halavany ary folo mankany 25 tongotra matevina ao anaty rano mando any Bimini.
Namboarina tamin'ny cays roa hafa, na nosy, nampiasana ny dredge cutter "Allan Judith" sy ny "Western Warrior", ny famerenan'ny Ocean Cay dia naharitra iray taona namoronana 65 hektara. Nitarina hatrany amin'ny 90 hektara izy io. The Ellicott® Ny marika dredge dia nanompo tamim-pahatokiana ho fitaovana fampiroboroboana voalohany ho an'ny toeram-pitrandrahana mandritra ny taona 20.
Ny zavamaniry fanolorana ny nosy dia misy ny mpisaraka amin'ny rivodoza 12 sy ny efijery manindrona 12 izay mampihena ny atin'ny rano amin'ny 20 isan-jato. Avy eo ny aragonite dia ahetsiketsika amin'ny fehikibo eo an-tokotanin'ireo elatra vita amin'ny elatra, izay mametraka azy amin'ny fantsom-piainana mivantana mihinana amin'ny fehikibo amin'ny sambo. Ny fitaovana dia arofanina amin'ny sambo amin'ny vidin'ny 3,400 taonina isan'ora.
Ny orinasa dia mampiasa sambo misy fehikibo 70,000 DWT handefasana ny ankamaroan'ny akora. Ity sambo ity dia afaka manaisotra amin'ny vidin'ny 4,000 taonina isan'ora. Ho an'ny dia lavitra kokoa dia zahana ny sambo misy ny ranomasina sy ny vata fampiasa amin'ny boaty.
Marcona Ocean Industries dia manana fifanarahana maharitra amin'ny governemanta Bahamas hitrandrahana ny aragonite sy ny fitaovana hafa amidy amin'ny faritra lehibe fametrahana efatra - Bimini, Joulter's Cay, Tongue of the Ocean ary Schooner's Cay. 55 kilaometatra atsinanan'ny Miami, Florida ny fametrahana, ary ny vokatra dia alefa any amin'ny tsenan'ny East Coast sy Gulf Coast.
Navoaka indray avy amin'ny World Dredging & Marine Construction